MMYOS ရေဒီယိုထည့်ထားပေးသော ၀က်ဆိုဒ်များအား ဆာဗာပြောင်းလဲခြင်း အသိပေးစာ | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
MMYOS ရေဒီယိုထည့်ထားပေးသော ၀က်ဆိုဒ်များအား ဆာဗာပြောင်းလဲခြင်း အသိပေးစာ
Posted on October 31, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော်တို့ အဝေးရောက်မြန်မာလူငယ်များ ပရဟိတ အဖွဲ့လေးမှ ပြုလုပ်ထားသော အွန်လိုင်းရေဒီယိုလေးကို ဘလော့ဆိုဒ်အတော်များများမှာ တွေ့ရလို့ ၀မ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ရေဒီယိုလေးကလည်း ၂၄နာရီ အချိန်ပြည့် သီချင်းများကို ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် သီချင်းတောင်းလိုသူများအတွက်လည်း dj@mmyos.com ကို အပ်ကာ မိမိတောင်းဆိုလိုသည့် သီချင်းအမည်နဲ့ တောင်းဆိုသည့်အကြောင်းအရာလေး ပြောကာ တောင်းဆိုနိုင်ပါသည် ။ အခု အရေးတကြီး ပြောချင်တာလေးက မိတ်ဆွေတို့ ၀က်ဆိုဒ်မှာ ထည့်ထားသော ရေဒီယို ကုဒ်လေးအား ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံချင်တာပါခင်ဗျာ ။ မပြောင်းမဖြစ်လို့ ပြောင်းလဲလိုက်ရတာပါ မခဲယဉ်းပါဘူး အခု ပေးလိုက်မယ့် ကုဒ်လေးကို အရင်ကုဒ်လေးမှာ အစားထိုး လိုက်ရုံပါပဲ ခင်ဗျာ … မိမိတို့ဝက်ဆိုဒ်မှာထည့်ပေးသော ၀က်ဆိုဒ်ပိုင်ရှင်များနှင့် သီချင်းများကို နားဆင်ကြသော မိတ်ဆွေများ အားလုံးကို ကျွန်တော်တို့ MMYOS ရေဒီယိုအဖွဲ့သားများမှ အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ရေဒီယိုကုဒ် အသစ်ကို ဒီနေရာ တွင် ရယူနိုင်ပါသည်။
This entry was posted in ဖတ်ပေးပါရန်. Bookmark the permalink.
← Skype 6.10.0.104 (for pc)	Online Magazine အတွက် ကဗျာများ ၊ ဆောင်းပါး များ နှင့် ကာတွန်းများ ရေးသားလိုသူများ ဖိတ်ခေါ်ပါသည် →
4 thoughts on “MMYOS ရေဒီယိုထည့်ထားပေးသော ၀က်ဆိုဒ်များအား ဆာဗာပြောင်းလဲခြင်း အသိပေးစာ”	lamin aung says:	October 31, 2013 at 12:50 pm	အကိုရေ proxy ၀ယ်ချင်လိုပါ၊ကူညီပါအုံး အကို ဘယ်ဆိုက်က၀ယ်ရင်အဆင်ပြေနိုင်မလည်းအကို ကျတော်သူငယ်ချင်းရဲ Prepaid MasterCard နဲ့ဝယ်မှာ မလိုပါအကို. link လေးတစ်ချက်လောက်ညွန်းပေးပါလားအကို။
Reply	lamin aung says:	October 31, 2013 at 12:50 pm	အကိုရေ proxy ၀ယ်ချင်လိုပါ၊ကူညီပါအုံး အကို ဘယ်ဆိုက်က၀ယ်ရင်အဆင်ပြေနိုင်မလည်းအကို ကျတော်သူငယ်ချင်းရဲ Prepaid MasterCard နဲ့ဝယ်မှာ မလိုပါအကို. link လေးတစ်ချက်လောက်ညွန်းပေးပါလားအကို။
Reply	Aung Kyaw Pathein says:	October 31, 2013 at 4:50 pm	http://squidproxies.com/private-proxies/ မှာဈေးသက်သာပါတယ်ခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုတာလေးအတိအကျပြောပြပေးပါလား